Ka dib 11 sano oo ah adeeg u heellan, Lee Sheehy, oo ah agaasimaha barnaamijka ee Gobolka & Jaaliyadaha (R&C) ayaa ka tegi doona McKnight xagaagan. Sheehy, oo qorsheynayay inuu ka dego kaalintiisii aasaasiga ahayd, ayaa rajeynaya inuu taageero kala-guurka ku-meel-gaadhka ah ee hoggaanka cusub iyadoo ay Mu'asasadu isu diyaarineyso inay dhaqan galiso magaceeda cusub. Barnaamijka Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah.
"Waxaan ku mahadsan nahay Lee iyo kaalintiisa ku aaddan hormarinta howlgalka McKnight iyo abuuritaanka jaaliyado waara oo u adkeysta dhammaan gobolka Minnesota," ayay tiri Pamela Wheelock, madaxweynaha ku-meel-gaarka ah. Shaqaalaheenna iyo deeq-bixiyeyaashayadu waxay qiimeeyeen hoggaankiisa, aqoontiisa qotoda dheer ee arrimaha, iyo niyaddiisa u adeegidda liidata. Waxaan u rajeyneynaa isaga si wanaagsan oo uu ugu sii gudbo hamigiisa xiga. ”
Tan iyo markii uu ku biiray Aasaaska 2009, Sheehy wuxuu xoogga saaray shaqada goobta ku saleysan barnaamijka ee ku saabsan abuurista jaaliyado nolol lagu noolaan karo iyo ballaarinta fursadaha dadka oo dhan inay barwaaqo. Istaraatiijiyada guryeynta la awoodi karo ee McKnight dhexdeeda, barnaamijka Gobolka & Jaaliyadaha ayaa taageeray Guryaha loogu talagalay All, isbahaysi gobolka oo dhan kaas oo horumariya dadaallada siyaasadaha la wadaago ee u horseeda deganaansho guri dhammaan reer Minnesota, gaar ahaan kuwa dakhligoodu hooseeyo iyo dadka midabka leh. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijku wuxuu caawiyay bilaabista Iridda Horumar Barwaaqo, Shabakad gobolka oo dhan ah oo soo saartay calaamadaha ugu horeeya ee guryaynta gobolka Minnesota, kaas oo baaraya horumarka gobolka ee ku saabsan tallaabooyinka guryeynta muhiimka ah wuxuuna caddeeyaa in dadka lagu hayo meelaha shaqooyinka, iskuulada, iyo fursadaha waa furaha guusha degganaanshaha.
“Waxaan uga mahadcelineynaa Lee iyo kaalintiisa ku aaddan hormarinta himilada McKnight iyo abuuritaanka jaaliyado waara oo u adkeysta Minnesota oo dhan. Shaqaalaheenna iyo deeq-bixiyeyaashayadu waxay qiimeeyeen hogaankiisa, aqoontiisa qotoda dheer ee arrimaha, iyo niyaddiisa u adeegida is-hoosaysiinta. ” —PAMELA WHEELOCK, MADAXWEYNE INTERIM
Muddadii uu xilka hayey, kooxda R&C waxay la shaqeeyeen la-hawlgalayaasha sidii loo asaasay cusub Xarunta Dhaqaalaha, ururkii ugu horreeyay ee heer qaran oo horumariya kobcin loo dhan yahay si loo gaaro barwaaqo gobolka. Intaa waxaa sii dheer, McKnight wuxuu adeegsaday Isu-duwaha Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadiyaha, sanduuq cusub oo sabool ah kaasoo soo jiitay malaayiin doollar oo dheeri ah si loo helo guryo la awoodi karo oo badan, meherado xoog leh, dhul cagaaran, iyo xaafado kobcaya oo ku teedsan Wadada Cagaaran ee Wadada Laamiga ah ee Minnisota iyo Saint Paul.
Kahor doorkiisa McKnight, Sheehy wuxuu hogaan u noqday xirfad shaqo oo ah u shaqeyste dowladeed. Waxa uu ahaa kuxigeenka madaxa xeer ilaaliyaha guud ee hore Xeer Ilaaliyaha Guud Hubert H. Humphrey III, iyo madaxa shaqaalaha ee Sen. Amy Klobuchar. Wuxuu u soo shaqeeyay Magaalada Minneapolis sidii ugu horaysay ee agaasimaha fulinta ugu horeeya ee qorshaynta bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha, wuxuuna u ahaa maamule gobol ka tirsan Golaha Magaalaga inta lagu gudajiray maamulka Ventura.
Iyada oo BA ka qaadatay Harvard College iyo shahaadada sharciga ee Jaamacadda Minnesota, Sheehy wuxuu ku dhaqmayay sharciga 25 sano. Sannadihii 1970-yadii, wuxuu ka shaqeeyey Guddiga Dooroshada Mareykanka ee Waxqabadka Ololaha Madaxweynaha (“Guddiga Biyaha”). Shakhsi ahaan, Sheehy wuxuu waqtigiisa ku tabarucay goobo badan oo adeegga bulshada ah, oo ay kujiraan isagoo madax u ah Guddiga Xallinta Garsoorka ee Minnesota, kaas oo kordhiyey kala duwanaanta ballamaha garsoorka ee gobolka oo dhan.
"Waxaan ku faraxsanahay maalgelinta mustaqbalka ee Foundation ee bulshada iyo dhiirigelinta soo socota barnaamijka 'Vibrant & Sinnaanta Bulshada iyo saameynta ay ku yeelan doonto.' —LEE SHEEHY, DIRECTOR, REGION & Community
Sheehy ayaa yiri "Sharaf ayey ii aheyd inaan ka shaqeeyo McKnight, wixii tabaruc ah ee aan sameeyayna waxaa u sabab ahaa dadka iyo meelaha aan u adeegno iyo kuwa la wadaaga ballanqaadkeena adeegga," ayuu yiri Sheehy.
"Waxaan ku faraxsanahay maalgelinta mustaqbalka ee Foundation ee bulshada iyo dhiirigelinta soo socota barnaamijka 'Vibrant & Sinnaanta Bulshada iyo saameynta ay ku yeelan doonto.'
Iyadoo hadafkeedu yahay in u dhisaan mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal, barnaamijka cusub ee Bulshadda Vibrant & Sinnaanta wuxuu sharfan doonaa oo ku dhisi doonaa barashada wixii ka soo baxa shaqada muddada dheer halka loo sii fidiyo fikradaha cusub. Xilligan guga, waxaan dhejin doonnaa booska furitaanka agaasimaha barnaamijka cusub sidoo kale waxaan la wadaagi doonnaa wixii aan ka baranay geedi socodka fikirka bulshada. Waxaan rajeyneynaa inaan ku dhawaaqno xeeladaha ugu dambeeya iyo tilmaamaha barnaamijka deyrtan.